Home » etn » Manampy ireo firenena amin'ny fanandramana COVID i UAE
UAE dia hita ho iray amin'ireo firenena mandroso indrindra amin'ny fahasalamana sy ny fiarovana raha ny amin'ny COVID-19
Ny sampan-draharahan'ny fahasalamana Abu Dhabi dia manohana ny ezaka fanandramana iraisam-pirenena amin'ny alàlan'ny fanolorana andrana laboratoara ho an'ny COVID-19 santionany avy any ivelan'ny UAE.
Ity fandraisana andraikitra voalohany manerantany amin'ny endriny manerantany ity dia mampiseho ny serivisy sy tobim-pahasalamana manerantany Abu Dhabi ary manohy ny fanohanan'ny emirato ny ezaka manerantany hiadiana amin'ny COVID-19 taorian'ny fahombiazan'ny programa fitiliana fatratra.
Raha ny statistikan'i Deep fahalalana Group dia nanambara tamin'ity volana septambra ity, ny Emirà Arabo Mitambatra dia nametraka an'io faritra io amin'ny lisitr'ireo firenena azo antoka indrindra manerantany amin'ny fiatrehana ny COVID-19, ka nahatonga azy ho maodely manaitra ho an'ny mavitrika sy vonona hiatrika ny krizy COVID-19.
Ny fivoarana farany teo amin'ny areti-mandringana manerantany dia niteraka fitakiana fitomboan'ny fitakiana kalitao sy ara-potoana. Noho io antony io dia niditra an-tsehatra i Abu Dhabi hanohana ny ezaka fanandramana iraisam-pirenena amin'ny alàlan'ny fanomezana laboratoara ny santionany COVID-19 avy any ivelan'ny UAE. Ireo ezaka ireo dia manaraka ny laharan'ny UAE ho firenena mitarika manerantany amin'ny resaka fahaiza-manao fitiliana PCR, isan'ny fanadinana natao isaky ny capita, ary koa ny totalin'ny andrana laboratoara isan'andro ho an'ny COVID-19 isaky ny kapita.
Ity zava-bita manerantany ity dia miorina amin'ny fiaraha-miasa eo amin'ny mpandray anjara amin'ny sehatra tsy miankina UAE sy tsy miankina. Hatramin'ny nanombohan'ny areti-mandringana, i Abu Dhabi dia nampitombo tsara ny tahan'ny andrana isan'andro sy ny fahafahan'ny laboratoara nanomboka tamin'ny 1,000 ka hatramin'ny 170,000 isan'andro ny andrana, nampiasa laboratoara 22 natokana ho an'ny COVID-19. Ireo laboratoara ireo dia manome valiny marim-pototra ao anatin'ny ora adiny efatra monja.
Miara-miasa amin'ny Orility International Shipping Company (Abu Dhabi) miorina amin'ny Abu Dhabi, manokana amin'ny serivisy ho an'ny lojika, ary ny Etihad Airways, mpitantana ofisialin'ny Emira Arabo Mitambatra, dia nanomboka nahazo santionany fanandramana an'arivony avy any ampitan-dranomasina ny emirato, manodidina ny 5,000 ka hatramin'ny 10,000 isanandro. .
Laboratoara 'Unilabs', manampahaizana manokana amin'ny diagnostika sy serivisy any amin'ny laboratoara, dia niasa tamin'ny ambaratonga lehibe mba hanafainganana ny hafainganana amin'ny diagnostika sy ny fanadihadiana ny santionany ary hitrandrahana ny valiny amin'ny alàlan'ny vahaolana Baynunah, izay novolavolaina sy novokarina tany Abu Dhabi. Ny valiny dia omena ao anatin'ny 24 ora aorian'ny fotoana nandefasana ireo santionany any UAE.
Maneho hevitra momba ny fampandrosoana, HE Abdullah bin Mohammed Al Hamed, filohan'ny DoH, hoy izy: "Ny ekosistem'i Abu Dhabi dia manohy manamafy ny toerana misy azy ho iray amin'ny toerana itodiana manerantany. Ity fandraisana andraikitra ity dia taratry ny finoan'ny mpitondra fa ny fandresena amin'ny ady atao amin'ny areti-mandringana manerantany dia amin'ny alalàn'ny firaisankinan'ny olombelona sy ny fiaraha-miasa iraisampirenena no ahazoana izany. Androany, ny fotodrafitrasa momba ny fahasalamana eto an-tany dia ampiasaina ho an'ny serivisy ho an'ny olombelona lehibe kokoa sy hanampiana amin'ny ady amin'ny fielezan'ny virus COVID-19. Ny fanohananay ny ezaka iraisam-pirenena COVID-19 dia nanjary vokatry ny tontolo iainana sy fiaraha-miasa mahomby izay nahatonga ny fiaraha-miasa teo amin'ny mpiray antoka marobe manerana ny sehatra miankina sy tsy miankina any amin'ny Emira Arabo Mitambatra. ”
“Vao tsy ela akory izay, ny departemantan'ny fahasalamana - Abu Dhabi dia niresaka tamin'ny firenena maromaro hanohanana azy ireo amin'ny fanaovana andrana laboratoara any Abu Dhabi. Noho ny tontolon'ny lalàna mifehy anay mahomby sy ny fisian'ny matihanina amin'ny fahasalamana manerantany sy fahaizanay any Abu Dhabi, afaka nanome fanampiana izahay miaraka amin'ny fahalalàna logistikan'ireo mpiara-miombon'antoka aminay amin'ny sehatra miankina sy tsy miankina. Mandritra izany fotoana izany dia mandeha manerantany ny fifanakalozan-kevitra mba hamolavolana rafitra mitovy amin'izany hiatrehana ireo fanamby ateraky ny areti-mifindra ary hanadihady ny fomba mety hanomezan'i Abu Dhabi ny fanampiana ilaina amin'ny fanandramana laboratoara sy serivisy hafa. ”
Ny Andriamatoa Mohamed Mubarak Fadhel Al Mazrouei, filohan'ny vondrona Etihad Aviation dia nilaza hoe: “Amin'ny maha-kaompaniam-pirenen'i UAE azy, i Etihad dia reharehan'ny maha mpiara-miasa mavitrika manampy amin'ny fandrindrana sy fanamorana ny valinteny ataon'ny firenena manoloana ny Covid-19. Midika izany fa mampifanaraka haingana sy mihetsika amin'ny alàlan'ny fahafaha-manao mifanaraka amin'ny fitakiana sy ny laharam-pahamehana amin'ny fandefasana entana, sady manome vahaolana azo tanterahina amin'ireo fanamby manerantany. Ny fiaraha-miasanay mitohy amin'ny manampahefana eo an-toerana sy iraisam-pirenena, miasa akaiky amin'ny Departemantan'ny Fahasalamana - Abu Dhabi, dia porofon'ny fahaizantsika manolotra fanampiana mitatra amin'ireo firenena manerantany. ”
Mohammed Daoud, Lehiben'ny mpanatanteraka ao Atsinanana Afovoany Atsinanana, hoy izy: Ankafizinay ny ezaka lehibe nataon'ny Departemantan'ny Fahasalamana - Abu Dhabi amin'ny fanohanana ny ezaka fiaraha-miasa iraisampirenena hiadiana amin'ny areti-mandringana sy hiarovana ny fahasalamana sy ny fiarovana ny olona manerantany. Ny fiaraha-miasa mahomby ataon'ny laboratoara ao anatin'ny tamba-jotra Unilabs ho an'ny COVID-19 fanandramana amin'ny laboratoara Abu Dhabi dia ohatra iray hafa amin'ny tontolo iainana natolotry ny mpitarika UAE.
Ity krizy ity dia nanaporofo tokoa ny fahafahan'ny UAE hiatrika fanamby sy hahatratra ny ambaratonga avo indrindra amin'ny fizakan-tena manerana ny solaitrabe, izay nanosika ireo kaominin'izao tontolo izao hanaraka ny ohatra Abu Dhabi noho ny fitokisana sy ny fahatokisana ny valiny azo.
Tena reharehanay ny zava-bita vitanay tamin'ny fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-miombon'antoka aminay, izay taratry ny fanoloran-tenan'ny tompon'andraikitra hametraka maodely fiaraha-miasa tokana ary hametraka fari-pahaizana vaovao momba ny fahasalamana amin'ny rafitra fitsaboana eo an-toerana. ”
Eric Ten Kate, filoha lefitra ary lohan'ny siansa fiainana ho an'ny GIL, hoy izy: "Faly izahay fa ny Sampan-draharahan'ny Fahasalamana - Abou Dhabi dia nanankina ny Agility ho iraka iray manan-danja io. Niara-nientana izy io satria nisy ny finiavana sy fiaraha-miasa teo amin'ny ankolafy rehetra ankoatra ireo mpiara-miombon'antoka aminay ao Etihad, sy ireo ekipa Mazoto miasa amin'ny lafiny roa. ”
Ten Kate nilaza fa ny fiaraha-miasa iraisampirenena sy ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny fanjakana sy ny tsy miankina "dia mahatonga izao tontolo izao ho toerana azo antoka kokoa ao anatin'ny valanaretina COVID-19, ary izy ireo no lakilen'ny fanampiana antsika hihoatra an'io loza mitatao momba ny fahasalamana manerantany io rehefa vaksiny azo antoka sy mahomby no omena."
Hatramin'ny nanombohan'ny areti-mifindra, ny UAE dia nahavita fitsapana COVID-29 maherin'ny 19 tapitrisa ho an'ny mponina 9.5 tapitrisa, miaraka amina fomba fiasa manerantany sy mifototra amin'ny siansa, izay nahatonga ny firenena hanatratra ny iray amin'ireo lafy ambany indrindra ary ny taham-pahafatesana eto an-tany.